warkii.com » Bandhigga Sushant Singh Rajput, sheekada filimka, cillada uu lahaa iyo wax walba oo ku saabsan filimka Dil Bechara ee shalay la daawaday
Bandhigga Sushant Singh Rajput, sheekada filimka, cillada uu lahaa iyo wax walba oo ku saabsan filimka Dil Bechara ee shalay la daawaday
Waxaa shalay la daawaday filimka Dil Bechara oo ah filimkii ugu dambeeyay ee uu sameeyay atoorihii geeriyooday ee Sushant Singh Rajput, waxaana dadkii daawaday ay ka bixiyeen falcelin wanaagsan.
Dadka filimkaan qiimeynta ku sameeyay waxay siiyeen: 2.5, shantiiba (2.5/5)
Jilaayaasha: Sushant Singh Rajput, Sanjana Sanghi, Saswata Chatterjee, Swastika Mukherjee, Sahil Vaid
Muxuu ku wanaagsan yahay: Waxaa aad loo ammaanay bandhigga Sushant Sing Rajput, waxaana lagu ammaanay qaabka uu meelaha liita kaga dhigayo mid cajiib ah isagoo adeegsanaya awooddiisa jilliin.
Muxuu ku liitaa: Waxaa aad loo dhaliilay dib u sameynta filimka, maadaama loo duubay filimkan sidii loo sameeyay halka laga soo min guuriyay sheekada ee The Fault In Our Stars, waxaa xitaa aad loo dhaliilay in dhinacyada kaamirada laga keenay xitaa ay tahay mid laga soo guuriyay asalka.
Sheekada filimka: DIL BECHARA waa sheeko jaceyl oo dhex mareyso laba dhallin yaro ah oo xanuunsan.
Gabadh lagu magacaabo Kizie Basu (Sanjana Sanghi) ayaa kasoo safartay Zambia iyadoo timid Jamshedpur, waxaana la socday waalidiinteeda (Saswata Chatterjee and Swastika Mukherjee).
Balse nolosheeda oo dhan ayaa is baddeleyso gabadhaas, waxaana ku dhacay kansarka dhuunta, kaasoo xitaa u diiday inay neefta qaadato. Sidaas darteed, waxaa qasab ku noqotay inay saaxiib ka dhigato tanagga oksijiinta (Oxygene) iyadoo sankana ay ugu jireen tubooyin daqiiqad walba oo nolosheeda ah.
Maalin ayay la kulantay Manny (Sushant Singh Rajput) iyadoo joogta kolleejka, waxaana ay markii hore moodeysay wiil aan wanaagsananyn, misena kibir badan, balse waxay markii dambe ogaatay inuu isaga xitaa ku dhacay la yiraahdo osteosarcoma, kaasoo xitaa sabab u noqday inay naafowdo mid ka mid ah lugahiisa, isla markaasna la gooyo.
Sidaas oo ay tahay wuxuu ku noolaa nolol wanaagsan oo uu isaga is dareensiiyay, waxaana taas ay sabab u noqotay in Kizie ay jeclaato Manny, waxaana ay billaabeen inay iyaga isla qaataan waqtiga ugu badan.
Kizie waxay marwalba u sheegi jirtay inay aad u jeceshahay album-ka Main Tumhara oo iska leeyahay Abhimanyu Veer (Saif Ali Khan), waxaana Manny uu dhageysanayay album-kan isagoo aanan jecleyn, balse markii dambe isaga ayaaba taageere u noqday Abhimanyu.
Kizie waxay niyadda ku heysay inay mar uun la kulanto fannaanka ay taageerto, waxaana Manny uu garowsaday muhiimmada ay Kizie u leedahay la kulanka Abhimanyu, sidaas darteed, waxa uu soo helay cinwaanka ee Abhimanyu, waxaana fanaanka uu ka ogolaaday inay la kulmaan isagoo ku ballamiyay magaalada Paris oo uu isagu deggan yahay.
Kizie qoyskeeda way ka diideen inay xaaladdaas ku safarto maadaama ay xanuunsaneyd, balse ugu dambeyn hooyadeed ayaa ogolaatay, iyadoo go’aansatay inay qayb ka noqoto safarka Paris, balse markii uu tikidhada soo jaray Manny, waxaa xanuun daran uu soo wajahay Kizie oo markii dambe la dhigay isbitaalka, waxa intaas ka dambeeyay ayaa loo fiirsanayaa filimka Dil Bechara.
Gunaanad: Filimka Dil Bechara waa filim jaceyl ah oo aad u qiiro badan, waxaana Sushant Singh Rajput oo daqiiqadaha ugu horreeya ee filimka madaddaalo socoto ah uu soo bandhigay jiliin taabtay qalbiyada wax jecel.
Waxaa sidoo kale la ammaanay heesaha ku jira filimkan oo uu ku faro-yareystay A R Rahman sida Main Tumhara, Taare Ginn, Afreeda, Maskhari, Khulke Jeene Ka iyo Mera Naam Kizie.